Yini Ukutshala kokuphelekezela?
Ukutshala kokuphelekezela kulapho izitshalo ezimbili noma ngaphezulu, zombili zisizana, zitshawla eduze komunye nomunye njengoba zithuthukisa (noma zingavikela) ukukhula komunye nomunye nokwandisa isivuno. Ucwaningo olwenziwe ngo-2005 no-2006 e-New Jersey, eMelika, lithola ukuthi ukutshala kanye i-dill, i-coriander kanye nokusakolo nepelepele kwandisa kakhulu ukutholakala kwezinambuzane ezizuzisayo, ezanciphisa umonakalo owenziwe yi-European corn borer, isidalwa esikhulu esidla ezinye.
Ukutshala kokuphelekezela kuhloswe ukwandisa ukuhlukahluka kwemvelo futhi kunezinzuzo eziningi ekulimeni. Ngaphandle kokwandisa ukuhlukahluka kwezinhlobonhlobo zezinto ukutshala kokuphelekezela kuzosiza ekuthuthukiseni izingabunjalo lomhlabathi futhi ngenxa yalokho kwengeza ukutholakala kwezakhi zomhlabathi.
Izimila Zokuphelekeza Ezisizayo
Ngesinye isikhathi izitshalo ezimbalwa zifakwe phakathi kwesitshalo, isibonelo, amaklabishi ambalwa atshalwe phakathi kwezitshalo zamathanga. Izilwane ezihlala emhlabeni nasemanzini zikhangwa iklabishi futhi ngeke zinake amathanga.
Esinye isibonelo esihle lapho ummbila, ubhontshisi kanye namathanga zitshalwa ndawonye. Amabhontshisi anikezela inayithrojeni emhlabathini, ummbila usebenza njengesakhiwo sokweseka ubhontshisi futhi uvikela ithanga ngokumelene ne-squash vine borers ngenkathi ithanga lizomboza umhlabathi futhi livimbe ukukhula kokhula. (Ngokuphambene nalokho, izitshalo ezithile zinganqanda ezinye, isibonelo ubhontshisi akufanele uhlanganiswe no-anyanisi noma, futhi iklabishi namatamatisi akufanele kuhlanganiswe).
Ezinye izitshalo (iRomsemary no-Artemisia afra - i-African wormwood) zixhosha izinambuzane okwemvelo. Ezinye izitshalo ezifana nezaqathe, i-fennel kanye ne-yarrow ziheha izinambuzane ezinenzuzo ezinjengezinqandi, umanqulwana, kanye nezimpukane zezimbali. Ngokuvamile, amakhambi asetshenziselwa ukuphelekeza izitshalo.
Izitshalo Ezihambisana kahle Nezingahambisani kahle
Incwadi yokuchasisa ezolimo ngokwemvelo ye Surplus People Project (SPP) - ‘Basic Principles for Organic Cultivation and Livestock Production' yancoma lezi zitshalo ezilandelayo:
Izitshalo ezihambisana nalo: I-Marigolds, i-beetroot, iklabishi, isanqante, ikholifulawa, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ikhukhamba, ummbila, amazambane, amajikijolo
Engakuthandi:Dill, fennel, wonke amalungu omndeni we anyanisi
Izitshalo ezihambisana nawo: Isilimo esinengono emnandi edliyayo, anyanisi, i-kohlrabi, ubhontshisi wehlathi, ulethisi, umndeni weklabishi
Ezingakuthandi: umasitadi, ubhontshisi
Izitshalo ezihambisana nayo: I-Beetroot, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ama-chives, i-dill, u-anyanisi, i-rosemary, uhlobo lwesithonjana sokunonga, i-thyme
Engakuthandi: I-Dill, ama-fennel, wonke amalungu omndeni we-anyanisi
Izitshalo ezihambisano naso: I-Basil, ama-chives, ulethisi, anyanisi, uphizi
Engakuthandi:I-broccoli, iklabishi, ukholifulawa, i-dill, i-fennel, amazambane
Izitshalo ezihambisana nazo: Ama-marigold, ubhontshisi, i-broccoli, iklabishi, uliksi, uphasli, i-anyanisi entwasahlobo, utamatisi
Izitshalo ezihambisana naso: Ubhontshisi, upelepele obuluhlaza, ulethisi, ama-nasturtiums, ama-radishes
Engakuthandi: Amakhambi, amakhabe, amazambane
Imifino: Isitshalo seqanda
Izitshalo ezihambisana naso: I-Basil, ubhontshisi, ulethisi, uphizi, amazambane, isipinashi